ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ Technological University Hpa-an: နိုင်ငံခြားမှာ ပညာသင်လိုလျှင် အချက် (၁၀)ချက်
နိုင်ငံခြားမှာ ပညာသင်လိုလျှင် အချက် (၁၀)ချက်
LAS Group ပညာရေးအကြံပေးအဖွဲ့ကနှုတ်ခွန်းဆက်သပါရစေ။ကျနော်တို့၏ အတွေ့အကြုံများနှင့်
အင်တာနက်ပေါ်မှ အချက်အလက်များ အပေါ်အခြေပြု၍ ဒီဆောင်းပါးလေးကို မြန်မာကျောင်းသား
ဘာသာပြန်ချက်ထဲတွင် အမှားများပါလျှင် ခွှင့်လွှတ်ပေးပါရန် ဦးစွာပထမပြောကြားလိုပါသည် ခင်ဗျာ။
နိုင်ငံခြားမှာပညာသင်မည်ဆိုလျှင်အဤအချက်(၁၀)ကို သိစေချင်ပါသည် ။
နိုင်ငံခြားသို့ပညာသင်သွားလိုသော ကျောင်းသားများသည် နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းများတွင် တက္ကသိုလ်ပညာရေးကိုမိမိတို့အလိုကျရွေးချယ်ခွင့်ရရန်စဉ်းစားနေကြပြီးဖြစ်သည်။ကျောင်းသားများအနေ ဖြင့်မည်သည့်နေရာသို့သွားရောက်ရန်လျှောက်ထားရမည်ကိုဆုံးဖြတ်ရာတွင်အကူအညီရစေရန်အချက် (၁၀) ချက်ကို အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
တက္ကသိုလ်တွင်သင်နှင့်အတူနေခဲ့သောသူငယ်ချင်းများနှင့်ထားရှိခဲ့သောခင်မင်ရင်းနှီးမှုသည်သင့်ဘ၀တစ် လျောက်လုံးတွင်တည်တံ့နေပါလိမ့်မည်။သင့်အနေဖြင့်မည်သို့သောကွန်ရက်မျိုးကိုရှာဖွေနေပါသလဲ။နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များအနေဖြင့်နိုင်ငံပေါင်းစုံမှကျောင်းသားများကိုလက်ခံသင်ကြားပေးရာမိမိအနေဖြင့်ကမ္ဘာ့ နေရာအနှံ့အပြားမှသူငယ်ချင်းများနှင့်မိတ်ဖွဲ့ခွင့်ရသောသဘောပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်၏ကျောင်းသား ဟောင်း တကောက်အကြောင်းကိုဥပမာပေးလိုပါသည်။သူ့ကိုအမှတ်မထင်ပြန်တွေ့ခွှင့်ရသာအခါ သူဘာတွေလုပ်နေသလဲဟုမေးမိသည်။ အလုပ်အားလပ်ရက်များတွင် တက္ကသိုလ်တုန်းက သူငယ်ချင်းများ ထံသို့အလည်အပတ်သွားရင်းဖြင့် အားလပ်ချိန်များကုန်လွန်သွားသည်ဟု သူကကျွန်တော့်ကို ဖြေကြားခဲ့ သည်။ဆိုလိုသည်မှာသူသည်ဂရိ၊ယူကေ၊ပြင်သစ်၊ဆွစ်ဇာလန်နှင့်မော်ရိုကိုနိုင်ငံများသို့သွားရောက်ခဲ့သည့်အပြင်သူ့ဇာတိအီတလီနိုင်ငံသို့လည်းသူငယ် ချင်းများကိုအလည်တစ်ခေါက်ခေါ်သွားခဲ့သောအဓိပ္ပာယ်လည်းသက်ရောက်ပါသည်။နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များသည်ကျနော်သူငယ်ချင်းကဲ့သို့ကမ္ဘာပတ်ကာမွေလိုသူမဟုတ်သည့်တိုင်သင့်ကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးက သူငယ်ချင်းများ နှင့် မိတ်ဖွဲ့နိုင်သောကွန်ရက်ကိုရရှိစေပါလိမ့်မည်။
နိုင်ငံတကာကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုရွေးချယ်ရန်စဉ်းလျှင်ကျောင်းသားရောဆရာပါလူမျိုးစုံလင်သည့်ကျောင်းနှင့်ဌာနကိုစဉ်းစားသင့်ပါသည်။ပြည်တွင်းရှိတက္ကသိုလ်အများစုတွင်ဒေသအစဉ်အလာအရသင်ယူပြီးမြောက်ခဲ့သောပါမောက္ခအများစုဖြင့်သင်ကြားပေးသော်လည်း နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်ကျောင်းများတွင်မူ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အနှံ့အပြားမှ ဆရာများစုံလင်ကြရသည်။ ကျွန်တော်၏တက္ကသိုလ်တွင်ဥပမာအားဖြင့်ကျောင်းသား များကို ပထမနှစ်ကတည်းကစပိန်၊ကနေဒါ၊ဖင်လန်၊အမေရီကန်၊ပါကစ္စတန်၊ဂျာမနီ၊အာဂျင်တီးနားနှင့်ပြင်သစ်အပါအ၀င်နိုင်ငံစုံမှပါမောက္ခများကသင်ကြားပို့ချပေးကြသည်။ ထုိ့ကြောင့်ကျယ်ဝန်းသောပညာရေးနောက်ခံများမှ အကျိုးကျေးဇူးများကို အတန်းထဲတွင်မျှော်လင့်နိုင်ရုံမျှမက အသံနေအသံထား အမျိုးမျိုးကိုလည်း ထိတွေ့ ကြားသိခွင့်ရပါလိမ့်မည်။
နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ် များသည် ပို၍သေးငယ်လာပြီးအင်ဂလို-အမေရီကန် စာသင်ခန်းပုံစံအတိုင်းရှိနေ ကြသည်။စာသင်ခန်းများသေးငယ်သဖြင့်အပြန်အလှန်သင်ယူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုပို၍ရရှိစေသည်။ပြည်တွင်းတက္ကသိုလ်၊ကောလိပ်များတွင်(အမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ပါ)ကျောင်းသားများသည် ၂ နှစ်စာသင်ကာလ ပထမပိုင်းတွင်၎င်းတို့၏ပါမောက္ခအများစုနှင့်အပြန်အလှန်ပြောဆိုဆွေးနွေးရန်ကန့်သက်ခံရပြီးစာသင်ခန်း ကျယ်ကြီးများထဲတွင်သာအချိန်ကုန်ဆုံးသွားကြရသည်။နိုင်ငံတကာကျောင်းများမှာမူလစ်ဘရယ်ဝိဇ္ဇာဘာ သာရပ်ကောလိပ်များကဲ့သို့ပင်စာသင်ခန်းထဲရှိကျောင်းသားပမာဏကိုကန့်သတ်ထားကာပါမောက္ခများကိုစာသင်ခန်းပြင်ပရှိတက္ကသိုလ်နယ်မြေထဲတွင်ပင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းနိုင်ရန်အားပေးလှုံ့ဆော်ထားသည်။
များသောအားဖြင့်နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များတွင်အရွယ်အစားသေးငယ်ပြီးအဆောင်ထားရှိသောပုရ၀ုဏ် နယ်မြေများထားရှိကြသည်။ကျောင်းသားဘ၀သည်တက္ကသိုလ်ကြီးများကဲ့သို့အိမ်မှတက္ကသိုလ်နယ်မြေသို့ သွားရောက်ကာသင်ယူရန်သို့မဟုတ်ပို့ချချက်ကိုနာယူရန်လောက်သာမဟုတ်တော့ဘဲတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးမသိသူမရှိဖြစ်လာစေပါသည်။ထို့ကြောင့်သင့်အနေဖြင့်ပိုမိုတက်ကြွသောကျောင်းသားဘ၀ကိုရယူလိုပါကတက္ကသိုလ် နယ်မြေ ပမာဏပို၍သေးငယ်လေ၊ပိုကောင်းလေပင်ဖြစ်သည်။သို့သော်ပြောင်းပြန်ဖက်မှ ကြည့်လျှင် တက္ကသိုလ်ကောလိပ်များပိုမိုသေးငယ်လေလေ အရင်းအမြစ်ပိုနည်းလေလေ ဟုလည်းဆိုနိုင်ပြန်သည်။အား ကစားအထောက်အကူပစ္စည်းများ၊သုတေသနစာကြည့်တိုက်ကြီးများနည်းသွားမည်။ထို့ကြောင့်မိမိရယူလို သော တက္ကသိုလ်နယ်မြေအတွေ့အကြုံပေါ်တွင်မူတည်၍အရေးကြီးသည်ကိုစဉ်းစားသင့်ပါသည်။
နိုင်ငံခြားကျောင်းသားဖြစ်ခြင်းနှင့် နိုင်ငံတကာကျောင်းသားဖြစ်ခြင်းတို့အကြားအရေးပါသောကွာခြားချက်ရှိ သည်။ဥပမာပြည်တွင်းရှိပို၍ကြီးသောတက္ကသိုလ်များတွင်ပညာဆည်းပူးရန်နိုင်ငံခြားမှလာသောကျောင်း သား များသည်အခြားနိုင်ငံခြားကျောင်းသားများနှင့်မိတ်ဖွဲ့္ဇရုံမျှဖြင့်သာအချိန်ကုန်ဆုံးသွားမည်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များတွင်မူလူတိုင်းသည်ဒေသခံကျောင်းသားများပါမကျန်နိုင်ငံခြားသားများဖြစ်နေ သည်။တက္ကသိုလ်နယ်မြေပေါ်တွင်လွှမ်းမိုးထားသောနိုင်ငံသားဟူ၍မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ယဉ်ကျေးမှု ပြယုဂ်တစ်စုံတစ်ရာကကျောင်းသားများထဲသို့စိမ့်ဝင်နေလျှင်နိုင်ငံတကာကျောင်းဟူသောအမည်မှာအဓိ ပ္ပာယ်ကင်းမဲ့သွားပေလိမ့်မည်။လူတိုင်းသည်နိုင်ငံတကာဖြစ်နေပြီးသူစိမ်းဆန်ဆန်သီးခြားဖြစ်မနေပါ။
နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များတွင်အမြဲသုံးနှုန်းသောဘာသာစကားမှ ကျွန်တော်သိသလောက်ပြောရလျှင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားပင်ဖြစ်သည်။သင်၏ပညာရပ်များကိုယင်းဘာသာစကားဖြင့်လေ့လာဆည်းပူးရန်စိတ်ဝင်စားလျှင်နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်သည်အလွန်သင့်တော်သောတကက္ကသိုလ်ပင်ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ နိုင်ငံတ ကာသို့ကျယ်ကျယ်ဝန်းပေါက်ရောက် ရန်အတွက် အင်္ဂလိပ်စာတတ်ကျွမ်းမှု အဆင့်သည်ကျောင်းသား ထုထဲတွင်အမျိုးမျိုး ကွဲပြားနိုင်သော်လည်း TOEFLကဲ့သို့သောရမှတ်များ နှင့် အခြားသောစာမေးပွဲ ရလဒ်များအရ နိုင်ငံ တကာတက္ကသိုလ်များတွင် ကျောင်းသားအားလုံးကို အင်္ဂလိပ်စာတတ်ကျွမ်းမှုပိုင်းတွင် သင့်တော်သောအဆင့်တစ်ခုသို့ရောက်ရှိုအောင်စီစဉ်ပေးထားသည်။ သို့သော်လေးနှစ်ကြာသော အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားပြော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အပြောကောအရေးပါ ကောင်းစွာတတ်မြောက်လာကြသည် ကို ကျွန်တော်သတိထားမိခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်သို့ဝင်ရောက်လာသောကျောင်းသားများအနေ ဖြင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားစွမ်းရည် အကောင်းဆုံးမဖြစ်သည့်တိုင်ဘွဲ့ရသောအခါမိင်ဘာသာစကားပြောသူနီး ပါးကျွမ်းကျင်လာတတ်ကြပါသည်။ နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များသည်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုအရယဉ်ကျေးမှုစုံလင်သည့်အလျောက်ဘာသာစကားအသိုင်းအ၀ိုင်းသည်လည်းစုံလင်လှသဖြင့်အကျိုးကျေးဇူးတစ်မျိုးလည်းရပြန်သည်။ဥပမာ ကျွန်တော့်အတန်းထဲ တွင်ကျွန်တော့်ကျောင်းသားများပြောသောဘာသာစကားသောင်းပြောင်းထွေလာကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်ခွင့်ရလာသည်။သင်၏ပြဠာန်းချက်ကိုအင်္ဂလိပ်သင်နေစဉ်သင်၏လောက၀န်းကျင်မှာဘာသာစကားပေါင်း စုံရောနှောနေပါလိမ့်မည်။
နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်ကျောင်းတစ်ကျောင်းသည် ထူးခြားသောအလုပ်အကိုင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု အချို.တစ် ၀က်ကိုဖန်တီးပေးတတ်သဖြင့်ဤသည်မှာလည်းအရေးကြီးပါသည်။သင်သည်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ကျောင်း ဆရာဖြစ်လိုပါကဥပမာ သင့်အနေဖြင့် ပြည်တွင်းတက္ကသိုလ်တစ်ခုခုတွင်သင်ယူဆည်းပူးလျှင်ပိုကောင်းပါ လိမ့်မည်။သို့ရာတွင်သင်သည်နိုင်ငံတကာအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေလိုလျှင် နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်တစ်ကျောင်း ကျောင်းကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်သာကောင်းပါလိမ့်မည်။သူတို့ဘွဲ့ရသောအခါတစ်ကမ္ဘာလုံးရှိအလုပ်အကိုင်များ ကိုဖြန့်ကြက်စဉ်းစားချင့်ချိန်နိုင်လာမည်ဖြစ်သည်။ကျောင်းသားအချို.မှာမူမိမိတို့၏ဌာနေနိုင်ငံသို့ပြန်ရန်ရွေး ချယ်မည်ဖြစ်သော်လည်းအချို့မှာနယူးယောက်၊လန်ဒန်သို့မဟုတ်စင်ကာပူစသောနေရာများသို့ဦးတည် သွား ရောက်ကြလိမ့်မည်။ထိုနေရာများတွင်သူတို့၏ပညာရေး၊သူတို့၏တက္ကသိုလ်ကွန်ရက်များကအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းအတွက် တံခါးဖွင့်ထားပြီးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သင်မည်သည့်နေရာတွင်သင်ယူလေ့လာသည်ဖြစ်စေ တက္ကသိုလ်ပုရ၀ုဏ်ပြင်ပရှိလောကကိုရှာဖွေသင်ယူ ခြင်းဖြင့်သာအဆုံးသတ်ရပေမည်။ ထိုယဉ်ကျေးမှုနယ်ပယ်ထဲတွင်သင်ယူတတ်မြောက်မှုကိုရရှိရန်အခွင့်အ လန်းရှိနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်သင်သည်နိုင်ငံခြားတွင်ပညာဆည်းပူးရန်စဉ်းစားနေပါကတက္ကသိုလ်တည်ရှိသည့်နေရာတွင်သင့်နိုင်ငံနှင့်ဆက်နွယ်ပတ်သတ်မှုရှိမရှိသေချာအောင်ကြည့်ရမည်။ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားများစွာသည်စပိန်နိုင်ငံကိုစိတ်ဝင်စားသည်ဟူသောအချက်တစ်ချက်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ထံသို့ရောက်ရှိလာကြသည်။စပိန်ဘာသာစကားကိုရောယဉ်ကျေးမှုကိုပါသင်ယူလိုသဖြင့်လာကြခြင်းပင်ဖြစ်သည်။တစ်ခါတစ်ရံတွင်မူဤမျှလောက်တော့လေးနက်ခြင်းမရှိပါ။ ကျောင်းသူတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်ကြုံဖူး သည်။သူမကအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်စီးပွားရေးဘွဲ့တစ်ဘွဲ့ရလိုသည်။ဆောင်းရာသီကို မနှစ်သက်သဖြင့် သူမအနေဖြင့်နေသာပြီး၊ပူနွေးမှုအများဆုံးဖြစ်သောနေရာတစ်နေရာကိုရွေးချယ်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆို သည်။ယင်းအချက်နှင့်ကိုညီသောနေရာကိုစဉ်းစားရာမှစပိန်ကသူမအတွက်ကောင်းသောနေရာဖြစ်သွားခဲ့ လေသည်။သင့်စိတ်နှိုး ဆော်မှုမည်သို့ပင်ရှိနေစေကာမူ ၄ နှစ်လုံးလုံး သင်နေထိုင်ရမည့်နိုင်ငံသည် သင့်အ တွက် နေပျော်သောနေရာဖြစ်သင့်ပါသည်။
ဖြစ်နိုင်လျှင်သင်တက်ရောက်ရန်စဉ်းစားထားသည့် တက္ကသိုလ်များသို့စာသင်ချိန်တစ်ချိန်၊နှစ်ချိန်ခန့် သွားတက် ကြည့်ပြီး တက္ကသိုလ်ဘ၀ကိုလက်တွေ့ခံစားကြည့်လိုက်ပါ။ သင်၏တက္ကသိုလ်ပညာရေးကို ရယူသောနေရာသည်သင့်ဘ၀၏အရေးအကြီးဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ထို့ကြောင့်သင်ရွေးချယ်မည့်နေရာသည်သင့်အ တွက်သင့်တော်ခြင်းရှိမရှိုသေချာစွာသိရှိစေရန်အချိန်ယူပြီး အားထုတ်ကြည့်သင့်သည်။သင်၏နေအိမ်နှင့်ဝေးကွာလှသောတက္ကသိုလ်များကိုစဉ်းစားကြည့်လျှင်အမြဲတမ်း အလွယ်တကူဖြစ်နိုင်မည်တော့မဟုတ်ပါ။သို့ရာတွင်ကျောင်းတက်နေသောကျောင်းသားများနှင့်စကား တော့ပြောကြည့်ပါ။ထိုတက္ကသိုလ်အကြောင်း၊ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့စရိုက်အကြောင်း၊ပါမောက္ခများအကြောင်း၊ပြ ဠာန်းချက်အကြောင်းနှင့်ကဖေးဆိုင်မှအစားအစာများအကြောင်းတို့ကိုိထိုကျောင်းသားများထက်ပို၍မည်သူကမျှပြောပြနိုင်ကြမည်မဟုတ်ပါ။တကက္ကသိုလ်တိုင်းတွင်ထိုတက္ကသိုလ်နှင့်ပတ်သက်သည့်အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များအကြောင်းရိုးသားပွင့်လင်းစွာပြောဆိုခွင့်ရစေသောတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုသေချာစွာမေးမြန်းသင့်ပါသည်။သင်ကိုယ်တိုင်အနေဖြင့်လည်းယင်းအခွင့်အလန်းကိုရအောင်ယူသင့်သည်။ ကျွန်တော်၏တက္ကသိုလ်တွင်ကျောင်းသားလူမှုဝန်ထမ်းများကိုကျောင်းတက်မည့်လူသစ်များနှင့်တွဲပေးသောအစီအစဉ်တစ်ခုထားရှိပေးပါသည်။ထိုကျောင်းသားလူမှုဝန်ထမ်းများသည်မိမိတို့သဘောအလျောက်စိတ်အားထက်သန်မှုရှိသူများဖြစ်ကြပြီးတက္ကသိုလ်ကောင်းကြောင်းသာပြောပေးသူများမဟုတ်ဘဲတက္ကသိုလ်ပုရ၀ုဏ်အတွင်းအပြင်တွင်ရှိသည့်ပညာရေး၊လူမှုရေးဘ၀ နှင့်ပတ်သက်၍ရိုးသား ပွင့်လင်းသောအဖြများဖြေကြား ပေးပါလိမ့်မည်။
(၁၀)သင်၏အနာဂတ်ကို ဒေသတွင်းအတွက် သို့မဟုတ် တစ်ကမ္ဘာလုံးအတွက်လိုလားပါသလား ။
ဤမေးခွန်းသည် အနှစ်သာရမရှိသောဆောင်ပုဒ် တစ်ခုသဖွယ်ဖြစ်နေပါမည်။ သို့ရာတွင်အဤအချက်သည် လည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်ကိစ္စပင်ဖြစ်သည်။ “ကမ္ဘာဆန်သော” ဆိုသည့်စကားလုံးအတွက်ကျွန်တော် တို့သည်ထိုက်တန်သောဂုဏ်ဒြပ်ကိုရင်းနှီးမြုပ်နှံထားရသဖြင့် “ သြော် - ငါတော့ကမ္ဘာဆန်တဲ့ နိုင်ငံသား ဖြစ်ချင်လိုက်တာ”ဟုစိတ်သဘောအရတွေးမိကောင်းတွေးမိပါလိမ့်မည်။သို့သော်အမှန်တကယ်အားဖြင့် ဟုတ်မှန်ပါသလားဟုလေးလေးနက်နက်တွေးကြည့်သင့်သည်။ဘားရက်အိုဘားမားသည်အိမ်ဖြူတော်ထဲ တွင်ရှိသည်မှာသေချာပေသည်။သူ၏နိုင်ငံသားအမှတ်သင်္ကေတမှာအမေရီကန် နိုင်ငံသား ဖြစ်နေသော ကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။(ကျွန်တော်လည်းဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ရောက်မှာသေချာပေလို့လား)နိုင်ငံ တကာ တက္ကသိုလ်များတွင်ဒီဂရီဘွဲ့များရလိုသောကျောင်းသားများမှာနိုင်ငံတကာနောက်ခံများဖြင့်လာရောက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကွဲပြားသောဒေသအသီးသီးတွင်နေထိုင်ခဲ့ခြင်း၊ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးပြောဆိုခြင်း၊နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မျိုးစုံရှိခြင်းစသည်ဖြင့်စုံလင်လှသည်။ထို့ကြောင့်ပြည်တွင်းကန့်သတ်ချက်ကိုမကျော်လွန်ဘဲမိမိတို့အနာ ဂတ်ကိုသက်တောင့်သက်သာစီစဉ်ကြသကဲ့သို့အခြားကျောင်းသားများမှာမူမိမိတို့ပြည်တွင်းအ၀န်းအ၀ိုင်းကိုကျော်လွန်၍အကျိုးခံစားခွင့်ရယူလိုကြသောသဘောပင်ဖြစ်သည်။ထိုကျောင်းသားများသည်ပိုမိုကျယ်ဝန်းသောယဉ်ကျေးမှုရပ်ဝန်းမှအတွေ့အကြုံများဖြင့်အိမ်ပြန်ရန်မျှော်မှန်းကြသည်။မည်သည့်ရပ်ဝန်းတွင်သက် တောင့်သက်သာဖြစ်မည်ဟု စဉ်းစားတတ်ရန်လူတိုင်းအတွက်တော့မဖြစ်နိုင်ပေ။
မြန်မာကျောင်းသား ကျောင်းသူများအားလုံး ပြည့်စုံကောင်းမွန်သော ပညာရေး နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းများတွင် ပညာသင်ယူရရှိနိုင်ကြပါစေ။
လိုအပ်သော အကြံဥာဏ်များကို မေးမြန်းလိုပါရင် အောက်ပါအတိုင်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်ခင်ဗျာ။
LAS Group – International Education Consultants, Mandalay Head Office
No. 6, 33th Street, Bet: 67th & 68th Street, Chan Aye Thar Zan, Mandalay, Myanmar.
Mobile: (+95) 9910 53125, 9731 64372, 9431 46107
E-mail: joe@lasgroups.com or learned.advisory.services@gmail.com